Amazambane nge amakhowe ukhilimu omuncu e multivarka ingalungiswa imodi batch, futhi wokukucima zohlelo. Kunoma ikuphi, usebenzisa lezi zingxenye, uqiniseka ukuthola ukudla okumnandi futhi eqotho ukuthi uzokubona yonke indlu yakho.
Amazambane nge amakhowe e ukhilimu omuncu e multivarka: iresiphi
Uma ungafuni ukupheka isidlo eziyinkimbinkimbi futhi eside ukuba ekudleni, sincoma ukuthi usebenzise iresiphi. Ukuqalisa ke, awudingi imikhiqizo ezibizayo, kanye nenani elikhulu isikhathi.
Ngakho indlela ukulungiselela amazambane nge amakhowe e ukhilimu omuncu e multivarka? Ukuze wenze esidlweni esinjalo ezanelisayo kwabendlu yakhe, kudingeka alungiselele:
naphakathi amazambane nezilimo eziyizigaxa - 4 PC.
amakhowe fresh ezinkulu - 300 g;
ukhilimu obukhulu - 200;
usawoti, pepper kanye namakhambi omisiwe - zisetshenziswe ngokubona;
amafutha yemifino - 6 nezinkezo ezinkulu;
onion esikhulu - 1 ikhanda;
ushizi kanzima - 150 g
Ukuze amazambane nge amakhowe ukhilimu omuncu e multivarka Kwatholakala esihlwabusayo mnandi, zonke izingxenye kufanele kuthathwe ngokucophelela. Nezilimo eziyizigaxa of yemifino wathi ukugeza uthathe tincetu. Bulb mahhala kusukela husk, aqotshwe zibe cubes. Ngokuqondene amakhowe, bese usika kubo zibe tincetu mncane. Futhi ngokwehlukana wagcoba ushizi.
Ukushisa inqubo yokwelapha isikhunta
Isidlo sasemini, ingxenye yalo kuba ngothando okuphekiwe amazambane multivarka nge amakhowe, esihlwabusayo. Indlela Yokuthola lokhu dish is okwethulwa kulesi sihloko. Umphumela ujabulele, uma zonke izingxenye izitsha pre-ethosiwe. Ngenxa yalesi amakhowe sandile kudivayisi isitsha, ahlanganisa imodi batch. Uma wonke umswakama kusukela amakhowe uye ayahwamuka, banezela anyanisi 5 nezinkezo ezinkulu samafutha zemifino. Govuza yezingxenye, basuke ethosiwe cishe imizuzu engu-20 ngaphambi siwasebenzise.
Ekupheleni ukwelashwa ukushisa ukungezwa fresh champignon ukhilimu awugqinsi, usawoti, amakhambi omisiwe kanye pepper. Govuza yezingxenye, ukubhebhetheka kwazo ipuleti ehlukile, futhi kwaphela isikhathi esithile kwesokunxele sibukela.
Uma amakhowe kuthiwa kuphekeke, Multivarki isitsha ezigcotshwe izinsalela amafutha yemifino futhi basakaza tincetu amazambane. Ayoliswe nabo pepper, usawoti kanye namakhambi omisiwe, imifino camera amakhowe ukhilimu omuncu, okuyinto yena, ufafaze ushizi vukuza. Esitsheni enjalo ibhalwe imodi batch (lid ivaliwe) cishe imizuzu engu-60. Ngesikhatsi kulandzelwa lendlela, amazambane kufanele kube soft kakhulu futhi kuphekeke.
Ingabe eyethulwe dinner
Manje uyazi ukuthi ukupheka amazambane nge amakhowe ukhilimu omuncu multivarka. Ngemva komsindo, eyinqaba Casserole ushizi camera sehlukaniswe izicucu futhi basakaza phezu amapuleti. Ukuze etafuleni ayethula nge nocezu lwesinkwa kanye ukhukhamba okuzenzela.
amazambane Baked nge amakhowe multivarka: zokupheka best
Ukuze ufunde indlela ukubhaka izithako ezishiwo multivarka, sabatshela ngenhla. Kodwa uma ungakwazi ukudla lokhu dish, sincoma ukuthi ufake it out. Ngenxa yalesi sidinga:
naphakathi amazambane nezilimo eziyizigaxa - 3 PC.
amakhowe ezinkulu fresh - 200;
ukhilimu obukhulu - 100 g;
utamatisi unama - 2 nezinkezo ezinkulu;
usawoti, pepper kanye namakhambi fresh - esetshenziswa ngokubona;
izaqathe - 1 isiqephu ezinkulu;.
ukuphuza amanzi - 1 inkomishi.
Kulesi sigaba isihloko sizokutshela mayelana nendlela iyisitshulu amazambane nge amakhowe ukhilimu omuncu multivarka. Okokuqala sidinga uhlanza konke nemifino. Ngaphezu kwalokho, kufanele uqale ukuchotshozwa yabo. Potato nezilimo eziyizigaxa kanye anyanisi onion uthathe cubes kanye izaqathe - tincetu. Futhi ngokwehlukana oqoshiwe amakhowe fresh kanye namakhambi.
Uma imikhiqizo bahlanza nechobozekile, kufanele uqale ukwakheka izifundo. Kuze kube yimanje, izigubhu enkulu ekusakazeni cubes amazambane, tincetu izaqathe kanye anyanisi kanye amakhowe fresh. Okwanezela kulezi izithako usawoti, amakhambi oqoshiwe kanye pepper, zingabantu okuxubile kahle.
Esikhathini sokugcina emikhiqizweni ukusakaza obukhulu ukhilimu omuncu kanye utamatisi unama. Phinda uhlanganise amazambane nge amakhowe, kukhona isisekelo inkambo yesibili.
Inqubo kokulungiselela multivarka
Ngokufeza konke lezi zinyathelo, ingxube esiphelele lenzelwa endishini zedivayisi ekhishini 1 inkomishi yamanzi kuthululwe. Ngemva kwalokho kwakhiwa isidlo savalwa futhi misa inqubo zokucisha. Kulolu hlelo, amazambane kanye amakhowe ukhilimu omuncu e multivarka kufanele uzilungiselele imizuzu 65. Phakathi nalesi sikhathi, zonke izithako kuyoba ezithambile ngokuphelele, kwakheka utamatisi-omuncu isobho.
Othulwe dinner umndeni
Sikadali, kuphekwe ngokuvumelana iresiphi ngenhla, a okunomsoco kakhulu futhi kwanelise. Ngemva ukwelashwa ukushisa kuqedile, amazambane, amakhowe futhi sauce elimnandi okuye kwasakazwa eminyakeni amapuleti. Fafaza esincane amakhambi fresh, isidlo wakhonza etafuleni, kanye nesinkwa kanye isaladi imifino.
Lokhu idina kahle uyasondla umzimba, enika ke amandla amaningi futhi umzamo.
Ukusebenzisa imikhiqizo efana namazambane, amakhowe fresh nezinye izithako, ungakwazi ukulungiselela siqu izitsha zabo ezahlukene ngokuphelele. Into esemqoka - ukuthobela yonke izincomo iresiphi bese usebenzisa lesifanele ukupheka imodi.
Kufanele kuphawulwe ukuthi okumnandi isobho ecebile zingenziwa ngaphezu eqeda baking amazambane nge amakhowe, nalaba izithako.
Resort abahlukile "Velegozh" (Tula esifundeni)
Jamaican rum "kusho uCaptain Morgan". Amazwana nemibono yabantu onolwazi
Fedor Fedorovich Shalyapin - indodana yendodana edumile, biography, amafilimu